खानेपानीमन्त्री मन्त्री मगरको नाम कसरी आयो बे’पत्ता सूचीमा ? २,५०६ जनाको नामवलीसहित हेर्नुहोस् — SuchanaKendra.Com
खानेपानीमन्त्री मन्त्री मगरको नाम कसरी आयो बे’पत्ता सूचीमा ? २,५०६ जनाको नामवलीसहित हेर्नुहोस्
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्रीलाई बे’पत्ता पारिएका व्यक्तिको छा’नबि’न आयोगले सशस्त्र बे’पत्ता नागरिकको सुचीमा राखेको छ । विगतमा भएको १० वर्षे द्व’न्द्वका समयमा पूर्ण र आशिंक रुपमा बे’पत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको हो । आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको बे’पत्ताको सूचीमा २ हजार ५ सय ६ जनाको नाम समेटिएको छ ।
उक्त सूचीमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरको नाम पनि भएको कुराले सबैलाई चकित बनाएको छ । बे’पत्ता पारिएको छानबिन आयोगले भने मन्त्री मगरको उ’जुरी आ’शिंक बे’पत्ताका रुपमा परेकाले उनको नाम पनि त्यसै अनुसार समावेश गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी निरञ्जन घिमिरेले भने, ‘आशिंक बे’पत्ता भनेको पहिलो बे’पत्ता भएर पछि सम्पर्कमा आउनु भएकोहरु हो ।
मन्त्री बिना मगरको पनि आंशिक बे’पत्ता भनेर उजुरी परेको हुनाले त्यहाँ नाम रहेको हो । अब हामीले यही विषयमा विभिन्न सूचना, जानकारी, प्रमाणहरु संकलनका लागि आह्वान गरेका छौं ।’ आयोगको सूची अनुसार सबैभन्दा धेरै बे’पत्ताको उजुरी बर्दियाबाट परेको छ । बर्दियाका २ सय ५४ जनाको नाम बे’पत्ता भएको सूचीमा छ ।